Etu esi etinye iphone na ọnọdụ DFU, ụzọ Apple - Iphone
iphone m na -ajụ oyi ma na -akụkwa
nyocha ekwentị mkpanaaka ekwentị ụlọ nyocha 2015
kedu ebe ngwa ahịa ngwa m dị
na -arụ ọrụ siri ike na -enweghị wifi
iphone m na -aga na ozi olu
DFU na-anọchi anya Ngwaọrụ femụwe Update , na ọ bụ ụdị miri emi nke iweghachi ị nwere ike ime na iPhone. Otu onye ndu ọgụgụ isi Apple kụziiri m otu esi etinye iPhones na ọnọdụ DFU, yana dịka teknụzụ Apple, emeela m ya ọtụtụ narị ugboro.
N’ụzọ dị ịtụnanya, ahụtụbeghị m edemede ọzọ kọwara etu esi abanye DFU mode etu esi zụọ m. Otutu ihe omuma di o doro anya na ezighi ezi . N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe DFU mode bu , otú femụwe na-arụ ọrụ na gị iPhone , ma gosi gị nzọụkwụ site na nkwụsị olee otú DFU weghachi gị iPhone.
Ọ bụrụ n ’ị ga - ele anya karịa ịgụ (n’ezie, ha abụọ nwere ike inye aka), wụfee na nke ọhụụ YouTube vidiyo banyere ọnọdụ DFU na otu esi DFU weghachi iPhone .
Ihe Need Kwesịrị Knowmara Tupu Anyị Amalite
Na Igodo ụlọ bụ akara okirikiri n'okpuru ihe ngosi iPhone gị.
Na Ra / Tetanụ Button bụ aha Apple maka bọtịnụ ike.
’Ll ga-achọ a ngụ oge ịgụ na 8 sekọnd (ma ọ bụ ịnwere ike ime ya n'isi gị).
Ọ bụrụ na ị nwere ike, ndabere gị iPhone ka iCloud , iTunes , ma ọ bụ Finder tupu itinye iPhone gị na ọnọdụ DFU.
OZI: Macs na-agba ọsọ macOS Catalina 10.15 ma ọ bụ ihe ọhụrụ ojiji Finder ka DFU weghachite iPhones.
Etu esi etinye iphone na ọnọdụ DFU
Ikwunye gị iPhone n'ime kọmputa gị na-emeghe iTunes ọ bụrụ na ị nwere a Mac na-agba ọsọ macOS Mojave 10.14 ma ọ bụ PC . Meghee Chọta ọ bụrụ na ị nwere a Mac na-agba ọsọ macOS Catalina 10.15 ma ọ bụ karịa . Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na iPhone gị dị ma ọ bụ gbanyụọ.
Pịa ma jide Sra / Tetanụ Button na Home Button (iPhone 6s na n'okpuru) ma ọ bụ olu ala button (iPhone 7) ọnụ maka 8 sekọnd.
Mgbe 8 sekọnd, hapụ leepra / Tetanụ Button ma gaa n'ihu na-ejide Home Button (iPhone 6s na n'okpuru) ma ọ bụ olu ala button (iPhone 7) ruo mgbe iPhone gị pụtara na iTunes ma ọ bụ Finder.
Hapụ bọtịnụ Home ma ọ bụ bọtịnụ olu. Ngosipụta nke iPhone gị ga-abụ oji kpamkpam ma ọ bụrụ na ị banyere DFU n'ụzọ gara nke ọma. Ọ bụrụ na ọ bụghị, gbalịa ọzọ site na mmalite.
Weghachi gị iPhone iji iTunes ma ọ bụ Finder.
Etu esi etinye iPhone 8, 8 Plus, Ma ọ bụ X Na ọnọdụ DFU
Ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ na-enye usoro ụgha, na-eduhie eduhie, ma ọ bụ nke mgbagwoju anya mgbe ha na-agwa gị otu esi DFU weghachite iPhone 8, 8 Plus, ma ọ bụ X. Ha ga-agwa gị ka ị gbanyụọ iPhone mbụ, nke bụ ihe na-enweghị isi. Gị iPhone ga-abụ anya tupu ị na-etinye ya na DFU Mode .
Ọ bụrụ na vidiyo anyị na-amasị gị, lee vidiyo ọhụrụ anyị YouTube banyere olee otú DFU weghachi gị iPhone X, 8, ma ọ bụ 8 Plus . Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụ usoro a, usoro a dị mfe karịa ka ha siri mee! Usoro a malitere dịka nrụpụta siri ike.
Iji DFU weghachite iPhone X, 8, ma ọ bụ 8 Plus, ngwa ngwa pịa ma hapụ bọtịnụ olu elu, wee pịa ngwa ngwa ma hapụ bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe ihuenyo ga-agba oji.
Ozugbo ihuenyo gbanwere oji, pịa ma jide bọtịnụ olu ala ka ị na-aga n'ihu ijide bọtịnụ n'akụkụ.
Mgbe 5 sekọnd, hapụ akụkụ bọtịnụ ma nọgide na-ejide olu ala button ruo mgbe gị iPhone na-egosi na iTunes ma ọ bụ Finder.
Ozugbo ọ pụtara na iTunes ma ọ bụ Finder, hapụ bọtịnụ olu. Ta-da! Gị iPhone nọ na ọnọdụ DFU.
Cheta na: Ọ bụrụ na Apple logo na-egosi na ihuenyo, ị na-ejide ala olu button maka kwa ogologo. Malite usoro ahụ site na mmalite wee nwaa ọzọ.
Etu esi etinye iPhone XS, XS Max, Ma ọ bụ XR Na ọnọdụ DFU
Nzọụkwụ maka itinye iPhone XS, XS Max, XR na ọnọdụ DFU bụ otu ihe ahụ maka usoro maka iPhone 8, 8 Plus, na X. Lelee vidiyo YouTube anyị banyere etinye iPhone XS, XS Max, ma ọ bụ XR na ọnọdụ DFU ọ bụrụ na ị bụ karịa nke onye mmụta anya! Anyị na-eji iPhone XS m eje ije gị na usoro ọ bụla nke usoro ahụ.
Etu esi etinye iPhone 11, 11 Pro, Ma ọ bụ 11 Pro Max Na Ọnọdụ DFU
Nwere ike itinye iPhone 11, 11 Pro, na 11 Pro Max na ọnọdụ DFU site na isoro usoro ndị ahụ maka iPhone 8 ma ọ bụ karịa. Lelee anyị YouTube vidiyo ma ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka na-arụ ọrụ site na usoro.
Ọ bụrụ na ị ga-ele anya karịa ịgụ…
Lelee nkuzi ohuru YouTube anyị banyere otu esi etinye iPhone n'ime ọnọdụ DFU na otu esi eme DFU weghachi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya na ọrụ.
Okwu nke Ndo aka na nti
Mgbe ị DFU weghachi gị iPhone, kọmputa gị erases na reloads ọ bụla bit nke koodu na-achịkwa software na ngwaike na gị iPhone. Enwere ikike maka ihe ịga nke ọma.
Ọ bụrụ na gị iPhone mebiri emebi n'ụzọ ọ bụla, na karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-mmiri mebiri emebi, a DFU weghachi nwere ike imebi gị iPhone. Mụ na ndị ahịa gbara mbọ iweghachi iPhones ha iji dozie obere nsogbu, mana mmiri mebiri ihe ọzọ na-egbochi iweghachite iji mezue ya. A useable iPhone na obere nsogbu nwere ike ịghọ kpamkpam unusable ma ọ bụrụ na a DFU weghachi ada ada n'ihi mmiri-mmebi.
Gịnị bụ femụwe? Gịnị Ka Ọ Na-eme?
Firmware bụ mmemme na-ejikwa ngwaike nke ngwaọrụ gị. Sọftụwia na-agbanwe oge niile (ị rụnye ngwa ma budata email ọhụrụ), ngwaike anaghị agbanwe agbanwe (olile anya, ị gaghị emeghe iPhone ma megharia ihe mejupụtara ya), na ngwa ngwa ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara mgbanwe - belụsọ ya nwere ka.
Kedu ngwaọrụ eletrọnik ndị ọzọ nwere ngwa ngwa?
Ha niile! Cheedị banyere ya: Igwe igwe gị, igwe ihicha, igwe onyonyo, na igwe ndakwa nri na-eji ngwa ngwa iji chịkwaa bọtịnụ, iheomume, na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa. Can’t nweghị ike ịgbanwe ihe ntọala Popcorn na microwave gị, yabụ na ọ bụghị ngwanrọ - ọ bụ ngwa ngwa.
DFU weghachi: ụbọchị niile, ụbọchị ọ bụla.
Ndị ọrụ Apple weghachite ọtụtụ iPhones. Nyere nhọrọ, m ga-achọ mgbe niile họrọ DFU weghachi ihe mgbe nile ma ọ bụ mgbake mode weghachi. Nke a abụghị iwu Apple nke gọọmentị na ụfọdụ teknụzụ ga - asị na ọ karịrị, ma ọ bụrụ na iPhone nwere nsogbu na nwere ike -eme na a weghachi, a DFU weghachi anọchi ndị kasị mma ohere nke idozi ya.
Daalụ maka ịgụ ma enwere m olileanya na isiokwu a na-akọwapụta ụfọdụ ozi na-ezighi ezi na ịntanetị banyere otu esi abanye na ọnọdụ DFU na ihe kpatara ị ga-eji jiri ya. M na-agba gị ume ka ị nabata gị geekiness n'ime. I kwesiri ịdị mpako! Ugbu a, i nwere ike ịgwa ndị enyi gị (na ụmụaka), 'Ee, m maara otú DFU weghachi m iPhone.'
Daalụ maka ịgụ na ihe niile kacha mma,